Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukwaphula Iindaba zeJamaica » Ukufika ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa kwiCarnival Sunrise eJamaica namhlanje
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula Iindaba zeJamaica • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Inqanawa yokuhamba ngenqanawa yeCarnival Sunrise eJamaica
Inqanawa yokuhamba ngenqanawa iCarnival Sunrise icwangciselwe ukuba ifike eOcho Rios, eJamaica, namhlanje, ngoMvulo, nge-13 kuSeptemba 2021, inabakhweli abahamba ngeenqanawa abayi-1,700.
Le iya kuba kukufika kwenqanawa yesithathu kulandela ukuvulwa kwakhona kokhenketho lwenqanawa ngo-Agasti 2021.
Ukufika kweenqanawa ezimbini zangaphambili ngo-Agasti kuye kwaphumelela kwaye zonke iiprotokholi ezifunekayo ekuvunyelwene ngazo ngololiwe zajongwa ngokungqongqo kwaye zabekwa esweni.
I-Carnival Sunrise kufuneka ihlangabezane namanyathelo angqongqo alawula ukuqala kwakhona kokuhamba ngenqanawa.
Ukhenketho lwaseJamaica Umphathiswa, Hon. U-Edmund Bartlett, uchaze ukuba “le iya kuba kukufika kwenqanawa yesithathu emva kokuvulwa kwakhona kwezokhenketho ngo-Agasti ka-2021. UMthetho woLawulo lweNtlekele. ”
"Ukufika ngenqanawa ezimbini zangaphambili ngenyanga yeThupha kuye kwaphumelela kwaye zonke iiprotokholi ezifunekayo ekuvunyelwene ngazo ngololiwe zajongwa ngokungqongqo kwaye zabekwa esweni," wongeze watsho.
UMphathiswa uBartlett ucacisile ukuba iiprotokholi kunye nokubeka esweni ngokungqongqo kuya kuhlala kufanelekile koku kunye neminxeba elandelayo yenqanawa. Ukufika kwabahambi ngenqanawa bavunyelwe ukuba batyelele kuphela amaziko ngaphakathi kweeNdawo eziQinisekileyo eziqinisekisiweyo yiNkampani yoPhuhliso lweMveliso yezoKhenketho (TPDCo) kwaye bavunyelwe ukuhamba kuphela ngezothutho ezinelayisensi phantsi koMthetho weBhodi yabakhenkethi.
“I-Carnival Sunrise kufuneka ihlangabezane namanyathelo angqongqo olawulo lwe- ukuqala kwakhona ukuhambisa ngenqanawa, efuna malunga neepesenti ezingama-95 zabakhweli nabasebenzi ukuba bagonywe ngokupheleleyo kwaye bonke abakhweli babonelele ubungqina beziphumo ezibi kuvavanyo lwe-COVID-19 oluthathwe kwiiyure ezingama-72 zokuhamba ngomkhumbi. Kwimeko yabantu abangakhange bagonywe, njengabantwana, kufuneka kwenziwe uvavanyo lwe-PCR, kwaye bonke abakhweli bayavavanywa kwaye bavavanywe (i-antigen) xa beqala, ”watsho uMphathiswa uBartlett.
UMphathiswa uBartlett ukwacacisile ukuba izibuko lifumene iiprothokholi ezibekwe liCandelo loMphathiswa Wezempilo kunye nokuPhila kunye neenkampani zokuhamba ngeenqanawa, kunye ne-TPDCo ikwajonga ukuthobela imigaqo.
“IKhabinethi yenze isigqibo sokuququzelela ukufika ngenqanawa ngosuku lokungahambi ngenjongo yokuhlonipha isivumelwano sethu neCarnival Cruise Line. Siqinisekile ukuba iinkqubo ezomeleleyo kunye nolawulo olumiselweyo lwanele ukugcina bobabini abantu kunye nabakhweli abafikayo bekhuselekile ”Wongeze watsho uMphathiswa uBartlett.
Uye waphawula ukuba: "Kwiphulo lethu lokukhusela ubomi kunye nokuziphilisa, uRhulumente ufuna ukugcina isikhundla saseJamaica njengendawo yokuqala yokuhamba ngenqanawa kulo mmandla ngelixa esebenza ngokusondeleyo namaqabane ethu okuhamba ngenqanawa ukugcina imigangatho ephezulu yezokhuseleko."
Ibhodi yoKhenketho yase-Afrika igxeka uMzantsi Afrika ...
Abantu baseMelika banokuhamba njani baye eCanada phantsi kwemithetho emitsha?
Umkhosi wase-Eswatini ophetheyo ngelixa iintetho ze-SADC zinokuba ...
I-United Airlines: Iinqwelomoya zoMbane zibeka ukuba zithathe uhambo ...
Ukhenketho oluBomvu luqhuma eTshayina ngo-2021
INdibano eNkulu ye-UNWTO eMorocco: Imfihlo ayikabikho ...
IsiXeko seeNgelosi phantsi kwe-COVID-19 yokwenyuka kwesithathu ...
I-FAA iyakwalela zonke iinqwelomoya zaseMelika ukuba zibhabhe ngaphezulu kweAfghanistan
Umnyhadala wokuqala weDive Grand Bahama ngookrebe kunye ...
Iihotele zaseHawaii zinengeniso enkulu ngoJuni 2021
Umboniso we-ECCO umzobo okhethekileyo wabakhenkethi eRoma
Iinqwelo-moya zase-Ethiopia ziqala ukusebenza ngeenqwelomoya ngokupheleleyo ...
IRiphabhlikhi yaseCzech yamkela abahambi baseMelika
Ezokhenketho iFiji Yazisa i-CEO eNtsha